Cayaartooyda Kubadda Kolleyga ee matalaya Muqdisho oo ku wajahan dalka Tanzania – Radio Muqdisho
Cayaartooyda Kubadda Kolleyga ee matalaya Muqdisho oo ku wajahan dalka Tanzania
Cayaartooyda Kubadda Kollayga ee matalaya magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in ay u amba baxaan caasimada Daara-salaam ee Wadanka Tanzania, halkaasi oo ay uga qeybgalayaan tartan kubadda Kolleyga ah oo loo qabanayo magaalooyinka Bariga iyo Bartamaha Afrika.
Tarankaani oo sanadkiiba mar loo qabto magaladooyinka Wadamada Bariga iyo Bartamaha Afrika ayaa Soomaaliya waxaa sanadkan uga qeyb galaya cayaartooy ka kala socota magaalooyinka Qardho iyo Muqdisho.
Xasan Aadan Xaaji Yabarow Wiish Gudoomiyaha Isboortiga ee gobolka Banaadir oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in cayaartooyda ay muddo labo bil ah tababar ku qaadanayeen gudaha magaalada Muqdisho, waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyay inay guulo soo hooy karaan sanadkan.
“Muddo ka badan labo bil ayaan tababar ku jirnay, runtii cayaartooyda waxaan is dhihi karnaa markan meel fiican ayaad gaarsiiseen, doorkooda unbaa ka sugeynaa inay ka soo dhalaalaan, oo ay kor u qaadaan magaca Caasimadda oo ay ku cayaarayaan” ayuu yiri Guddoomiye Xasan.
Guddoomiyuhu waxa uu shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay garab istagaan bahda Isboortiga maadama uu qayb weyn ka qaadan karo Nabadda.
“Shacabka waxaan ka codsanayaa inay sagootin iyo soo dhaweyn u sameeyaan cayaartooyda ka socota caasimadda ee ka qeyb galaysa tartanka magaalooyinka bariga iyo bartamaha Qaaradda Afrika, Isboortiga waxa uu qeyb ka cayaaraa isdhexgalka bulshada iyo horumarka dalka” ayuu yiri Xasan Aadan X.Yabarow.
Xildhibaanno iyo siyaasiyiin booqday xabsiga dhexe ee Beladweyne
Dr Xabeeb oo tababar caafimaad degmada Caabudwaaq uga furaya howlwadeenno caafimaad